Builtin iPhone camera ကို Pro ကျကျ အသုံးချကြမယ် -
Builtin iPhone camera ကို Pro ကျကျ အသုံးချကြမယ်
ကျွန်တော်တို့တွေ ကိုယ့်လက်ထဲက iPhone လေးတစ်လုံးနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြတဲ့အခါ ပုံကောင်းတွေ ထင်ထားသလို မရလို့ စိတ်ညစ်တတ်ကြပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အခပေး ဝယ်ယူရတဲ့ Camera Apps တွေ အသုံးမချနိုင်လို့ ပုံကောင်းတွေ မရတာလို့ ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ အဲ့လို မဟုတ်ပါဘူး Pro Mode တွေ မပါတဲ့iPhone Original Camera နဲ့လဲ ပုံကောင်းတွေ ရိုက်ကူးလို့ ရပါတယ်။
ဒီနေ့ဆောင်းပါးလေးမှာတော့ iPhone Original Camera ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ Setting တစ်ခုချင်းစီအလိုက် အသုံးချရိုက်ကူးနည်းတွေကို ဖော်ပြသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ စလိုက်ကြရအောင် …
1.ပထမဆုံး ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ရိုက်ကူးဖို့ Camera App ကို အလွယ်ကူဆုံး ဖွင့်ကြမယ်
(၁) Screen Locked ထားတဲ့အခြေအနေမှာ ဘယ်ဘက်ကို Swipe လုပ်ပြီး camera ကို အမြန်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
(၂) ဖုန်းကို အသုံးပြုနေတုန်း camera ဖွင့်ချင်ရင် App အရမ်းများတဲ့သူတွေအတွက် Camera App ရှာမတွေ့တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်ဘက် Dock လေး ထဲမှာ camera app လေး ထည့်ထားလိုက်ရင် ရှာရပိုလွယ်ပါတယ်။
(၃) Control Center မှာလဲ Shortcut လေး ထည့်ထားပြီး အမြန်ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
2.Using Grid Lines
(၁) Camera မှာ Grid တွေ သုံးခြင်းအားဖြင့် Horizon နဲ့ Vertical Line တွေပါတာကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ Subject ရွဲ့စောင်းနေမှာကို ပူစရာမလိုတော့ဘူး။
(၂) Rule of thirds ကို အသုံးချလို့ရပါတယ်။
( Rule Of Thirds ကို အသုံးပြုပုံကတော့ Camera Grid တွေထဲမှာ ပါတဲ့ Power Points ၄ခုထဲကို ကိုယ့်ရဲ့ subject ထည့်ရိုက်တာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။)
(၃) Ground or ceilings က Object တွေရိုက်တဲ့အခါ မျက်နှာပြင်နဲ့ တစ်သားထဲကျဖို့လဲ ကူညီပေးဦးမှာပါ။
Grid Line ဖော်ရန်
Settings > Camera > Grid ကို on ပေးပါ
3.Choose the perfect shooting mode
ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ ပုံစံနဲ့ iPhone Camera App အောက်မှာ ပါတဲ့ Camera Mode တွေ ကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ် Mode ကို အသုံးချသင့်လဲဆိုတာ သိရဖို့ Camera Mode တွေအကြောင်း ကြည့်လိုက်ရအောင် …
iPhone Model တွေ အလိုက် Photo, Portrait, Pano, Video, Time Lapse နဲ့ Slo-Mo ဆိုပြီး Camera Mode တွေ ရှိပါတယ်။
iPhone XS နဲ့အရှေ့ပိုင်း ဖုန်း တွေမှာ Square ဆိုတဲ့ Mode ကို auto ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပြီး iPhone 11 Series မှာဆိုရင်တော့ ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Photo Mode ကို အရင်ဝင် Image Ratio မှာ Square ကို ရွေးပြီးမှ Square Ratio နဲ့ရိုက်လို့ရပါတယ်။
Photo နဲ့ Square Mode ကတော့ Image Ratio ပဲကွာသွားမှာပါ။
Portrait Mode ဆိုတာတော့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး သိကြတဲ့ ရှေ့ကြည် နောက်ဝါး ပုံလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ Portrait Mode ဟာ အဓိက Background ကို Blur ပေးတာကြောင့် subject ကို ပီပီပြင်ပြင် ပေါ်စေချင်တဲ့အခါ ဥပမာ လူအလှပုံတွေ ၊ Pet လေးတွေရဲ့ အလှပုံတွေ ကို ရိုက်ကူးတဲ့ နေရာမျိုးမှာ အဓိက အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Portrait Mode ကတော့ iPhone 11 , iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone XS , iPhone XS Max , iPhone XR , iPhone X , iPhone 8 Plus နဲ့ iPhone7Plus တွေ မှာပဲ ပါဝင်မှာပါ။
Pano Mode ကို Landscape နဲ့ Cityscape တွေ ရိုက်တဲ့အခါမှာ မြင်ကွင်း အကျယ်ကြီး ရချင်တဲ့ အခါမျိုးမှာ သုံးကြပါတယ်။
Pano ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ဖို့ ကင်မရာ ခလုတ်လေးကို နှိပ် ပြထားတဲ့ မြှားလေးအတိုင်း လက်ငြိမ်ငြိမ် နဲ့ ရွှေ့သွားလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
( လက်ငြိမ်ဖို့ အဓိက လိုအပ်တာကြောင့် Tripod လေးနဲ့ ရိုက်ကူးရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ )
4. အခု Video Mode တွေကို ဆက်သွားပါမယ်
Video နဲ့ Slo-Mo Mode ကတော့ အားလုံး သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။
Time Lapse ဆိုတဲ့ Mode ကတော့ Video တွေကို Fast-forward လုပ်ထားတဲ့ ပုံစံနဲ့ ရိုက်ကူးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
( Video, Slow-Mo, Time Lapse Modes တွေကို သင့်တော်သလို အသုံးပြုပြီး ရိုက်ကူးကြည့်ပါ။ ပြီးရင် iMovie နဲ့လဲ Edit လုပ်လို့ရပါတယ်။ )
ကိုယ့်ဖုန်းမှာ ပါဝင်တဲ့ အနောက်ဘက် Camera Lens တွေအလိုက် ရနိုင်မဲ့ Zoom Mode တွေအကြောင်း ဆက်သွားပါမယ်။
Ultra Wide ~ 0.5x
မြင်ကွင်း ကျယ်ကျယ် ရတဲ့ အတွက် Landscape , Cityscape တွေရိုက်ရင် သုံးနိုင်ပါတယ်။
Wide ~ 1x ပုံမှန် ကျွန်တော်တို့ ရိုက်နေကျ Camera Mode ဖြစ်ပါတယ်။
Telephoto ~ 2x
Zoom Range အများဆုံးဖြစ်ပြီး Subject တွေကို အနီးကပ်ဆွဲပြီး ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။
ဆိုတော့ iPhone 11 Series မှာပဲ ပါဝင်တဲ့ Night Mode ကရော ဘယ်လိုတွေ အလုပ်လုပ်သလဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်…
Night Mode အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အလင်းရောင် source အနည်းငယ်တော့ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာဖယောင်းတိုင်မီး ၊ ဆီမီး ၊ လမ်းမီး ၊ ကားမီး စတဲ့ Light source လေး တစ်ခုခုပါဝင်မှ Night Mode ပုံတွေက ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။ Night Mode ဆိုပြီး လမိုက်ညမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်တော့ သိပ်အဆင်ပြေမှာ မဟုတ်ပါဘူး xD
Night Mode အသုံးပြုဖို့ အတွက် ဘာမှ လုပ်ပေးစရာ မလိုပါဘူး။ ကိုယ်ရိုက်မဲ့ မြင်ကွင်းမှာ အလင်းရောင်အားနည်းနေတာနဲ့ Camera က Night Mode ကို Auto ဖွင့်ပေးမှာပါ။ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်က Icon လေးကို နှိပ်ပြီး Night Mode ရိုက်လို့ ရပါပြီ။
Night Mode ရပြီ ဆိုရင် အောက်ဘက်မှာ Slider လေးပေါ်မှာမှာ ဖြစ်ပြီး Auto 2s, 3s စသည်ဖြင့် ရွေးပေးပါတယ်။ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ချင်ရင်လဲ Slider လေးနဲ့ အတိုးအလျော့ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် Camera ခလုတ်နှိပ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုယ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ စက္ကန့်အလိုက် ဥပမာ 3s ဆိုရင် ၃ စက္ကန့် ရိုက်ကူးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် လက်ငြိမ်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
Low light မှာ ရိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Auto on ပေးမှာဖြစ်ပြီး 1x , 2x zoom နဲ့ပဲ တွဲဖက်ရိုက်လို့ရပါတယ် အလင်းရောင်source အနည်းငယ်တော့ ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် Exposure Time ကို လိုအပ်သလို ချိန်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
Use Portrait Mode Wisely
Portrait Mode နဲ့ အလန်းစား DSLR ပုံစံ shot တွေရိုက်တဲ့အခါ Object နဲ့ Lens နဲ့ ကြားမှာ 2-8 ft ခွာပေးသင့်ပါတယ်။
11 Pro နဲ့ Pro Max မှာပဲ Portraits Shots တွေကို သာမန် 1x wide နဲ့ရော ၊ 2x Telephoto နဲ့ရော နှစ်မျိုးနှစ်သက်ရာရိုက်ကူးလို့ရပါတယ်။
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XS, XS Max, and XR တွေမှာတော့ Portrait တစ်ပုံ ရိုက်ပြီးနောက် Background Blur ပမာဏ, lighting effect စတာတွေကို setting ထဲမှာ ပြန်လည်ချိန်ညှိလို့ရပါတယ်။
လှူပ်ရှားနေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ယူခဲ့အခါ Right Moment ကို ရိုက်ကူးနိုင်ဖို့ Burst Mode ကိုလအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
( ပုံလေးတွေကို ကြည့်ကြည့်ပါ )
This photo from iPhone Photography School
iPhone Xs နဲ့ အရှေ့က ဖုန်းတွေမှာ
10 photos /sec နှုန်းနဲ့ Shutter ကို နှိပ်ထားသရွေ့ရိုက်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
iPhone 11, 11 Pro, and 11 Pro Max မှာတော့ ကင်မရာ ခလုတ်ကလေးကို ဘယ်ဘက်ကို ပွတ်ဆွဲထားခြင်းဖြင့် Burst Shots တွေ ရိုက်ကူးလို့ ရပါတယ်။
ရိုးရိုး ပုံရိပ်တွေ ရိုက်ကူးရာကနေ တစ်ခါတစ်လေမှာလဲ Live Photo လေးတွေ ပြောင်းရိုက်ကြည့်ပါ။
Live Photos တွေဟာ ကင်မရာ ခလုတ်မနှိပ်ခင် 1.5 sec နဲ့ နှိပ်ပြီး 1.5 sec အချိန်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့3စက္ကန့်စာ Video အတိုလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ Live Photos တွေကို Photos ထဲမှာတင်ပဲ Edit လုပ်လို့ရပါတယ်။ Loop, Bounce, Long Exposure စတဲ့Effects လေးတွေလဲ ထည့်ပေါင်းလို့ ရပါတယ်။ ရေတံခွန်တို့ မြစ်တို့ကို Live Photos နဲ့ ရိုက်ပြီးရင် Long Exposure effect ထည့်ပေးလိုက်တာမျိုးတွေ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။
Capture Photo & Video at the same time with iPhone 11 Quick Take
iPhone 11 Series တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Quick Take function ကို အသုံးပြုပြီး Video ရိုက်ကူးရင်း ဓာတ်ပုံပါရိုက်လို့ ရပါတယ်။ Video ရိုက်ကူးဖို့ Video Mode ကို ဝင်စရာမလိုပဲ Photo Mode က နေ ကင်မရာ ခလုတ်လေးကို ဖိနှိပ်ထားလိုက်ရင် Video Record စလုပ်ပါပြီ။ လက်ကို လွှတ်လိုက်ရင် Video ရိုက်တာပြီးသွားပါတယ် လက်ကိုလွှတ်ပြီးVideo ဆက်ရိုက်ချင်သေးရင် ကင်မရာခလုတ်ကို ဖိထားတုန်းမှာ ညာဘက်ကို ပွတ်ဆွဲလိုက်ပြီးမှ လွှတ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ Video ရိုက်ကူးရင်း ဓာတ်ပုံလေးတွေလဲ လိုချင်တယ်ဆိုရင် ဘေးက အဖြူရောင် အဝိုင်းလေးကို နှိပ်လိုက် ရင် ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးပါတယ်။
အခြား iPhone တွေမှာလဲ Video ရိုက်ကူးနေရင်း ဘေးက အဖြူရောင် အဝိုင်းလေးကို နှိပ်ရင် Photo ရိုက်ပေးပါတယ်။
iPhone တွေရဲ့ Auto Focus ဟာ အတော်လေးတိကျပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တိုင် Focus ဖြတ်ချင်တဲ့အခါ Screen ပေါ်မှာ Focus ဖြတ်ချင်တဲ့ နေရာကို ထိလိုက်ရင် အဝါရောင် လေးထောင့်ကွက်လေးပေါ်လာပါတယ်။
Brightness level အလိုက် exposure ပေးတတ်ခြင်းကလဲ ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ခုရစေနိုင်မှာပါ။
ဘေးမှာ နေ ပုံစံ အဝါရောင်လေးပါ ပေါ်နေပြီး Exposure ကိုလဲ အပေါ် ၊ အောက် ရွှေ့ပြီး ချိန်ညှိလို့ ရပါသေးတယ်။
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ်က Focus ကို လက်နဲ့ထိပြီး ချိန်လိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ ဖုန်းက လှုပ်သွားတဲ့အခါ Focus Point က ပျောက်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အဲ့လို မဖြစ်အောင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာကို Focus Lock ပြုလုပ်ထားလို့ရပါတယ်။
Screen ပေါ်မှာ Lock Focus လုပ်ချင်တဲ့နေရာကို လက်နဲ့ ဖိထားလိုက်ရင် AE/AF Lock ဆိုပြီး ပေါ်လာရင် ရပါပြီ။
Use HDR ( High Dynamic Range )
HDR ဟာ High Contrast ဓာတ်ပုံတွေ ၊ အရောင်တွေ စို နေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ သာမန်ရိုက်တဲ့ပုံတွေထက် ပိုပြီး အရောင်တွေ လှတဲ့အတွက် HDR ကို ဖွင့်ပြီး ရိုက်သင့်ပါတယ်။
HDR ကို ဘယ်လို အသုံးပြုမလဲ?
Smart HDR ဆိုတဲ့ Feature ကို Setting ထဲကနေ ဖွင့်ပေးလို့ ရသလို ကင်မရာ ထဲကနေလဲ ဓာတ်ပုံရိုက်တော့မှ ဖွင့်ရိုက်လို့ရပါတယ်။
သင့်မှာ iPhone 11 Series တွေ ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ Smart HDR ကို ဖွင့်ပြီး ရိုက်သင့်ပါတယ်။
ဓာတ်ပုံရိုက်နေတုန်းမှာလဲ HDR ကို ညာဘက်အပေါ်ထောင့်က HDR ဆိုတာလေးကို နှိပ်ပြီး အဖွင့်အပိတ် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်မရေးတာတောင် စာလဲ အတော်ရှည်နေပြီဆိုတော့ ဒီမှာတင်ပဲ ရပ်ပါမယ်။ နောက် Post တစ်ခုကျမှ Edit လုပ်နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။
Ref: iPhonePhotography School
Photos from iPhonePhotography School
Next Password ခဏခဏ မေ့တတ်တဲ့ iOS users တွေအတွက် iCloud Keychain အသုံးပြုနည်း
Latest iPhone တွေမှာ 3D Touch မပါလာရတယ့် အကြောင်းအရင်း
Password ခဏခဏ မေ့တတ်တဲ့ iOS users တွေအတွက် iCloud Keychain အသုံးပြုနည်း